Dhaabbanni Risk Advisory jedhamu fundurri mootummaa Woyyaanee dukkanaayaadha jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dhaabbanni Risk Advisory jedhamu fundurri mootummaa Woyyaanee dukkanaayaadha jedha
Haalli bifa kanaan itti fufe taanaan yeroon humnoonni tikaa sabaan wolqoodanii wolrukutan fagoo miti jedha Risk Advisory'n.
Mootummaan Itoophiyaa tasgabbii dhabaa fi haalli nageenya biyyattiis rakkoo gurguddatti diramaa dhufeera, jedha dhaabbanni waa’ee nagaa fi tasgabbiii qoratu Risk Advisory. Akka gabaasa dhaabbata kanaatti mootummaa Itoophiyaa sochiin mormii bal’aa fi kan yeroo dheeraatu mudate. Sochii fi mormiin kuni irra jireessatti sarara sabummaa kan hordofe ta’uun isaa haalicha daran hammeesse, keessumattuu garee TPLF yaaddoo takkaa arganii hin beekne keessa seensise. Gama biraattiin mormiin adeemaa jiru kuni sabummaa irratti kan hundaaye ta’uun isaa moora humna tika biyyattii (raayyaa woraanaa, humna poolisaa fi humnoottan tikaa kanniin biroo) jidduttis woldhabdee fi babbaqaqiinsa suphuun rakkisu uumuun isaa kan hin oolle ta’uu dhaabbanni Risk Advisory kun jala sarara.
Hiriira geggeeffamaa jiruun alatti mootummaan haala gadhee fi qarqara hallayaa irra tirataa jiraachuu wantoonni agarsiisan heddu, akka qorannaa Risk Advisory kanatti. EPRDF keessa keessaa dadhabaa adeemuu fi diinagdeenis rakkoo bu’uuraa qabaachuun isaa ifa. Rakkoon biyyattii mudate bifa kanaan itti fufe taanaan muummicha ministeraa garagalchuu fi mootummicha humnaan fonqolchuunis waan hin oolle fakkaataa dhufeera jedha, dhabbanni kuni.
Akka ibsa dhaabbata Risk Advisory kanatti mootummaan Woyyaanee yeroodhaa yerotti dadhabaa akka adeemuu fi sochiin mormii biyya keessaa ummanni itti jiru ammoo cimee kan itti fufu ta’uu isaati kan dhabbanni kuni hubachiisu.
Previous articleErgamtoota naannoo Somaalee fi Afaar maaltu akkas mirqaansisee kofoo fi marxoo akka gatan taasise?
Next articleIrreecha irratti Woyyaaneen Oromoo dhibba heddu ajjeefte; Arsadii irratti duguuggii sanyii geggeesite